Rooxaani oo Sacuudiga u Digay: Iran baa saaxiib kuu ah ee Maraykan iyo Yuhuud saaxiib ha moodin – Radio Daljir
Rooxaani oo Sacuudiga u Digay: Iran baa saaxiib kuu ah ee Maraykan iyo Yuhuud saaxiib ha moodin
Noofember 8, 2017 8:48 g 0
Xasan Rooxaani, Madaxweynaha Iran, ayaa maanta oo Arbaco ah digniin u diray dowladda Sacuudiga, asaga oo uga digay in Sacuudigu uusan waxba ka faa’iidi doonin hanjabaadaha uu ku hayo “awooddan gamuurtay ee Iran.”
Madaxweyne Rooxaani ayaa sidaas yiri kaddib markii Amiirka ahna dhaxalsugaha Boqortooyada Sacuudigu, Maxamed bin Salmaan, uu Iran ku eedeeyey in ay mucaaradka Xuutiyiinta u gudbiso hub iyo gantaalada ridada dheer, sidaas darteedna ay Iran “weerar ku tahay Sacuudiga.”
Rooxaani oo u digaya Sacuudiga asaga oo ku guda jira shir golihiisa wasiirada, waxa uu yiri, “waad ogtihiin, caadna idin kama saarna awoodda iyo mansabka dowladda Islaamiga ah ee Iran. Kuwo idinka idin ka awood badan ayaa maaro noo waayey, horayna waxba uga qaadi waayey shacabka Iran.”
Madaxweyne Rooxaani oo digniintiisa sii wata waxa uu ku daray, “Dowladda Maraykanka iyo inta la xulufo ah waxa ay hal meel isugu keeneen wixii ay awood lahaayeen, waxna waa naga qaadi waayeen, oo guuldarro bay la hoydeen.”
Rooxaani waxa uu farta ku fiiqiyey, hadalkana uu ula danlahaa dagaalkii dheeraa ee Iran-Ciraaq ee sannadihii 1980-1988, kaas oo Iran ay ka guulgaartay, ahaana duullaan Sadaam Xuseen ay garbo u ahaayeen dowladda Maraykanka, dowladaha kale ee reer Galbeedka, iyo Sacuudiga iyo xulufadiisa Khaliijka Carabta.
Rooxaani ayaa mar kale ku celiyey in Iran ay nabad rabto, waxa uuna yiri, “nabad baan rabnaa, wanaag iyo horumar baan Yemen la rabnaa, Ciraaq iyo Siiriya la rabnaa, oo waliba Sacuudi Carabiya la rabnaa. Ma jirto wadiiqo kale oo aan ka aheyn tan saaxiibtinimada, walaalnimada, iyo in aan is wada garab-qabano oo isgarab-istaagno.”
“Haddii aad moodday in Iran aysan saaxiibkaa aheyn oo Maraykanka iyo Yuhuuddu ay saaxiibadaa yihiin, waxaad isku dhufsatay xisaab qaldan, waxaadna abbaaraysaa istaraatajiyad siyaasadeed oo aad u qaldan.”
Rooxaani oo mar kale dabajooga dagaalka Yemen waxa uu isweydiiyey “war haddii aad har iyo habeen duqeyn la dul taagantihiin mucaaradka Yemen, oo aydan maalin ka neefin illaa iyo bishii Maarso 2015, oo maalinkii ay hal gantaal hal maalin soo ridaan aad leedihiin waxaas ha la joojiyo oo sax ma aha. War dadkaan Yemeniyiinta ah ee aad iska duqaynaysaan maxaa markaas ayagana la gudboon?”
“Haddii Sacuudi carabiya ay la tacaalayso dhib siyaasadeed oo ayada u gooni ah, waa muhiim in ay isku noqoto, oo dhibkeeda soo xalisato, ee ma aha in ay ummado kale iyo gobolo kale dhib cusub ka abuurto,” ayuu Madaxweyne Rooxaani hadalkiisa ku soo gabagabeeyey.
Qormooyin Sacuudiga iyo siyaasadda cusub ee MbS hoos arag.
Sacuudi Carabiya: Ma Afgambi Dhicisoobay Mise Waa Xukun-Maroorsi Horleh?
Siyaasadda & Dhaqaalaha 265 Wararka 9550